China Soft PVC Photo Frames orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Soft PVC Photo Frame dia fitaovana mahafinaritra hanehoana ny fiainanao mahafinaritra tsy ao an-tranonao na eo amin'ny latabatrao ihany, fa koa amin'ny fotoana hafa toy ny fampirantiana na fampisehoana. Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny fitaovana malefaka PVC, izay ara-toekarena sy tontolo iainana. Ny toetra maharitra dia manampy amin'ny fiarovana ny sary, tsy tapaka toy ny ...
Soft PVC Photo Frame dia fitaovana mahafinaritra hanehoana ny fiainanao mahafinaritra tsy ao an-tranonao na eo amin'ny latabatrao ihany, fa koa amin'ny fotoana hafa toy ny fampirantiana na fampisehoana. Izy io dia vita amin'ny alàlan'ny fitaovana malefaka PVC, izay ara-toekarena sy tontolo iainana. Ny toetra maharitra dia manampy amin'ny fiarovana ny sary, tsy vaky toy ny fitaratra. Ary ny Soft PVC dia anti-rano hiarovana ny sary. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra izy ireo, tsy mila miova matetika, tsy ny hanana endrika sy loko rehetra fotsiny, ny logo ihany koa dia azonao volavolaina. Ny logo 2D na 3D dia azo atao amin'ny sanganasa iray ihany, ary miankina aminao ny antsipirian'ny habe. Ny fametrahana ny endrika dia tsara kokoa amin'ny vanim-potoana maoderina, ary ny fonosana dia mety ho isan-karazany hiarovana ny zana-kazo. Miaraka amin'ny fametahana ambadika hafa amin'ny lafiny samihafa, ny sary sary PVC dia mampiseho ny lafiny samihafa amin'ny sary. Afaka mamokatra ireo zavatra misy kalitao amin'ny fotoana famokarana fohy izahay.
Famaranana: maroloko arakaraka ny takinao
Safidy fametahana mahazatra: mpihazona hazo, mpihazona PVC, tsy misy fametahana amin'ny fanohanana, farango sns.
MOQ: 100 pcs isaky ny famolavolana
Teo aloha: Mpanokatra tavoahangy PVC malefaka
Manaraka: Kavina vita amin'ny tànana sy fehin-tànana PVC malefaka